ကျွန်မ ... ဒီရက်ပိုင်းပေါ့လေ .. ရင်ထဲမှာ ပေါ့ပါးနေသလိုလိုနဲ့ မွန်းကြပ်နေတယ် .. ကျွန်မသိပ်ချစ်တဲ့မိသားစု ..
ကျွန်မသိပ်ချစ်တဲ့ မေမေ .. တူတူမနေရတာ ၃နှစ်ရှိခဲ့ပြီပေါ့ ... ကဲ .. ကျွန်မ ဘာတွေဖြစ်ချင်နေလဲ .. ဟင့်အင်း .. ဘာမှမဖြစ်ချင်ဖူး .. တကယ်ဘာမှမဖြစ်ချင်ဖူးလား .. ဟင့်အင်း .. အများကြီးပဲ .. ရည်မှန်းချက်တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ .. စိုးရိမ်မှုတွေ .. ပူပန်မှုတွေ .. သံယောဇဉ်တွေ .. တကယ်ဆို ကျွန်မ ဟိုးကောင်ကင်းကြီးလို အဆုံးအစမရှိလွင့်မျောနေချင်တယ် ... တကယ်လွင့်မျောနေတာလားဆိုတာလည်း မသေချာသလို တည်ငြိမ်နေသလားလို့ ပြန်ဆန်းစစ်ပြန်ရင်လည်း မသေချာပြန်ဖူးမဟုတ်လား .. တိတ်တိတ်ကလေးတွေးရင်း ငြိမ်ငြိမ်ကလေး ထိုင်နေခဲ့မိတဲ့ ရက်တွေလည်း ရှိပါရဲ့ ... သူငယ်ချင်းတယောက်ကမေးတယ် . ကျွန်မက ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ရတာ သိပ်ကြိုက်တာပဲနော်တဲ့ ... ကောင်းကင်ကြီးရဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုတွေကို စောင့်ကြည်နေရတာ သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လေ ... ဟော .. ကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့်ရင်းနဲ့ မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ အပင်တန်းလေးများရဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှု .. တချိန်က သူတို့စိမ်းလန်းစိုပြေခဲ့ဖူးတာပေါ့ ..
အခုတော့ အကိုင်းလေးတွေပဲကျန်လို့ ကျိုးတဲ့ကျဲတဲ .. ကဲ .. သေချာပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦး .. သူတို့ခြောက်ကပ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားလို့ .. ဟင့်အင်း .. မဟုတ်ဖူးနော် . အပွင့်သစ် အရွက်သစ်တွေအတွက် ခနတာ အားယူနေကြတာ .. ဒီလိုပဲပေါ့ .. ကျွန်မတို့မှာလည်း .. အောင်မြင်မှုဆိုတာ ရှိမယ် .. ကျရှုံးမှုဆိုတာ ရှိမယ် .. လန်းဆန်းမှု တက်ကြွမှုဆိုတာရှိမယ် .. အားငယ်မှု .. ၀မ်းနည်းမှုဆိုတာ ရှိမယ် .. အမျိုးမျိုးပေါ့ကွယ် .. လောကဓံ တရားဆိုတာ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်သလို ဖြစ်လာတာမှ မဟုတ်တာ .. သူ့အလိုလို ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတာတွေကို ကျွန်မတို့က လိုက်ပြီး ပြုပြင်ယူနေရမှာလေ .. ကျွန်မတို့ အသက်ရှင်နေသရွေ့ကာလပတ်လုံး အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာကို လိပ်ပြာသန့်နိုင်ရင် လူဖြစ်ရကျိုး နပ်ပြီပေါ့ .. အော် ... ကျွန်မဘာတွေ တွေးနေမိပါလိမ့် ............
[ Photo Created by TM ]
Posted by မီးငယ် at 11:37 AM